ငွေစုမိပြီး၊လာဘ်ပွင့်စေရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ငွေစုမိပြီး၊လာဘ်ပွင့်စေရန်
Posted by ခင်ခ on Jun 18, 2012 in Society & Lifestyle | 31 comments
ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တိုလီမိုလီစာစုထဲက စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ ငွေစုမိပြီး၊လာဘ်ပွင့်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ရတာလေးကို ပြန်ရေးပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ငွေကြေးအဆင်မပြေသူတွေ ပြေလည်ဖို့နဲ့ ငွေကြေးအဆင်ပြေသူတွေလည်း လိုသလောက်ထက် ပိုမောက်စွာရစေလိုတဲ့ ဆန္ဒလေးနဲ့ပါ။ ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊မည့်သည့်နေ့ သားသမီးမဆို အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးပါ။
လုပ်ရမည့်နည်းက– စာရွက်အဖြူတစ်ခုပေါ်မှာ အောက်ပါသက်ဆိုင်တဲ့ အက္ခရာတစ်ခုကို မင်အနက်ရောက်ဖြင့် ရေးပြီးပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ဆောင် ထားလိုက်ရုံပါ။ စာရွက်က မိမိပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထဲ့လို့ရတဲ့ အရွယ်လောက်ဆိုရပါပြီ။
တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူများ – တနင်္ဂနွေနေ့နံနက် ၈း၁၅ နာရီတိတိမှာ သြ အက္ခရာကိုရေးပြီးဆောင်ပါ။
တနင်းလာနေ့မွေးသူများ – တနင်းလာနေ့ မွန်းလွဲ ၃း၄၅ နာရီတိတိ ဂ အက္ခရာကိုရေးပြီးဆောင်ပါ။
အင်္ဂါနေ့မွေးသူများ – အင်္ဂါနေ့ မွန်းလွဲ ၃း၄၅ နာရီတိတိ ဇ အက္ခရာကိုရေးပြီးဆောင်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများ – ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၉း၄၅ နာရီတိတိ ၀ အက္ခရာကိုရေးပြီးဆောင်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွန်းလွဲညနေပိုင်းမွေးသူများ -ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၉း၄၅ နာရီတိတိ ရ အက္ခရာကိုရေးပြီးဆောင်ပါ။
ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများ – ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၈း၄၅ နာရီတိတိ ဗ အက္ခရာကိုရေးပြီးဆောင်ပါ။
သောကြာနေ့မွေးသူများ – သောကြာနေ့ မွန်းလွဲ ၃း၄၅ နာရီတိတိ သ အက္ခရာရေးပြီးဆောင်ပါ။
စနေနေ့မွေးသူများ – စနေနေ့ မွန်းလွဲ ၂း၁၅ နာရီတိတိ ဒ အက္ခရာရေးပြီးဆောင်ပါ။
ယုံကြည်သူများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ငွေကြေးအတွက်ကံကောင်းခြင်းကို အထင်းအရှားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကပြောသလိုပြောမယ်နော် မယုံရင် ပုံပြင်မှတ်ပါ—-။
အခုတော့ လာဘ်ပွင့်တာလေး လုပ်ကြည့်အုန်းမယ်
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှားပြင်ချက်- မင်အနက်ရောက်ဖြင့် အစား မင်အနက်ရောင်ဖြင့် လို့ပြင်ဖတ်ပေးပါ။
ကျုပ်က အင်္ဂါ သားဗျ …နက်ဖန် ဇ လို့ ရေးပီး ဆောင်ထားပါ့မယ်….
ဇ မရှိဘဲ ဇိ မလုပ်ကြပါနဲ့….
တစ်ခုဘဲ သူများတွေလိုတော့ ?????
ကိုခင်ခရေ .. .ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိ .. ဒါမျိုးဆို လုပ်ကြည့်ဦးမယ် .. ဟိ
စာရွက်လေးရေးရတာလည်း လွယ် ..ဆောင်ထားရတာလည်း လွယ်တော့ … အပမ်းမကြီးဘူး … ။
ငွေစုမိမယ် …လာဘ်ပွင့်ငွေဝင်မယ်ဆိုတော့လည်း …….. စမ်းကြည့်ဦးမယ် …. ။
မဟုတ်လျှင် အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်နေရတဲ့ ပြသနာက … ပိုပိုဆိုးလာပြီ …. တဖြည်းဖြည်းပိုပိုပေါက်နေတဲ့ အိတ်ကိုပဲ ချုပ်ရမလား .. ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ ပါးစပ်ကိုပဲ ချုပ်ရမလား တွေးနေတုန်း ဒီနည်းလေးရတာ … ပျော်စရာပဲ …… ။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်နော် ….
ရေးရမယ့်အချိန်မတိုင်မီ ရေးမယ့်အနက်ရောင်ဘောပင်ကို ကြိုစီစစ်ပြီးရေးကြည့်ထားအုံးနော်။
ရေးမယ့်အချိန် အမှန်ရေးတော့မှ မင်မလိုက်တာတို့ ထစ်နေတာတို့မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
ကျုပ်က တနင်္ဂနွေသားဆိုတော့ အဲဒီအချိန် အိပ်ယာက နိုးကာစပဲရှိသေးတယ်။
မျက်နှာမသစ်ပဲ ရေးလို့ရော ရရဲ့လား……
များက အာတကီး အလွယ်တကူရမဲ့နည်းမှန်သမျှ အကုန်ဒူးတယ်…
ဖတ်ရတဲ့ တိုလီမိုလီစာထဲမှာတော့ မျက်နှာသစ်၊သွားတိုက်ပြီးရေးရမယ်လို့တော့ မပါဘူးဗျ။
ဒါပေမယ့်တွေးမိတာတစ်ခုတော့ရှိတယ် မျက်နှာမသစ်ဘဲရေးပြီးဆောင်ထားလို့ ငွေစက္ကူအသစ်တွေထက် ဟောင်းနွမ်းပေတာတွေ ရတာများလို့ ဘဏ်သွားလဲနေရအုံးမယ်နော်။
ထွက်ငွေတွေများနေလွန်းလို့ ကောက်ရိုးတစ်မျှင်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်အုံးမယ်
အဲလို ဆွဲလို့ ရမယ် ဆိုရင် တီတီNovy ရေ ….. ကောက်ရိုးပုံ ကြီးပဲ .. ဖက်အိပ် လိုက်ချင်တော့တယ် ….. ခုတလော အကုန်အကျ များနေ၏
စမ်းကြည့်အုံးမယ် ဗျို့….ပင်ပန်းတာမှ မဟုတ်တာနော့..။ ဒါနဲ .. စံ-ဇာဏီဘို ရော ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လောက်စုပြီး လာဘ်ဘယ်လောက် တောင်ပွင့်နေပြီလဲ သိချင်ထှာ….:D
တနင်္ဂနွေနေ့ ရောက်ရင် ရေးဆောင်ဘို့
မနက် ၉နာရီကျော် ဆိုတော့ အလုပ်ရောက်ရောက်ချင်း စာရင်းတွေ လုပ်တုန်း ၀ တလုံး ကောက်ရေးပြီး ဆောင်ထားလိုက်မယ်။ ဟဲဟဲ..
အပန်းမကြီးတဲ့နည်းလေးမို့ အခုကတည်းကမမေ့အောင်ဖုန်းထဲမှတ်ထားလိုက်ပြီး… ဆုံးထားတဲ့ငွေလေးတွေများ ကိုယ့်ဆီပြန်လာမလားလို့…ငွေထွက်ပေါက်ကအရမ်း များနေတဲ့ကြားထဲက “၀ယ်မှား” ကလည်းဖြစ်လိုက်သေး…ငိုချင်နေတယ်.. က..ကာ..ကားကားကား :`-(
ဈေးမကျအောင် ..ဖလာရီ ပြောင်းစီးဗျာ …
တစီး တိုက်သွားပီ ဆိုတိုင်း ..အကောင်းအတိုင်းရှိတဲ့ အစီးတွေ
အိုခေ … ရေးလိုက်တော့မယ် …
PaLote Tote says:
၃ နာရီ ၄၅ မှာရေးဖို့ စာရွက်နဲ့ ဘောလ်ပင် အဆင်သင့်လုပ်ထားတယ် ။
ဟာဂျာ စနေနေ့ကတည်းက ဒီပို့စ်ကို တင်ပါလားဂျာ
ခုတော့ နောက် ၆ ရက်လောက် ငွေထွက်နေအုံးမှာပေါ့..
ရွာစားကျော်ရေ စိတ်မရှိပါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းမနေ့က ညနေဘက် စာအုပ်ဆိုင်တွေရောက်လို့
၀ယ်လာတဲ့အထဲက ညကမှဖတ်မိလို့ ဒီနေ့တင်လိုက်တာပါ။
မခင်ခရေ… ရေးပြထားတာလေးတော့ မှန်ပါတယ်ဗျ… ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ အပြည့်အ၀တော့ မမှန်ဘူးပေါ့။
ကျနော်တို့ ဧကံသ ဂိုဏ်းအနေနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ ဒီအဆောင်လေးမှာ လိုအပ်နေတဲ့
အချက်လေးတွေ ရှိနေတဲ့ ဗျ…
ဘာလဲ ဆိုတော့ ရေးရမယ့် ဘောပင်ရဲ့ မှင်ရောင်ပေါ့ဗျာ…။
(ဥပမာ – တင်္နလာသားဆို (ဂ) ငယ်ကို ဘောပင်အစိမ်းရောင်နဲ့ ရေးရမည်) စသဖြင့်ပေါ့
အရောင်တွေရဲ့ စွမ်းအင်တွေဟာ အဆောင်ထားမယ့် နေ့သားအလိုက်အထူး အကျိုးပြုစေတဲ့လို့
ကျနော်တို့ အဘဆရာကြီးက သင်ပေးသွားပါတယ်။
စံဇာဏီဘို ဆိုတာလည်း အဘထောင်ထဲမှာတုန်းက ဂျီးတွန်းပေးပြီါ်
ဗေဒင်သင်ခဲ့တဲ့ တပည့်တစ်ဦးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီ ယတြာဟာလည်း
မူရင်းရေးသားသူရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထားပါတော့လေ။
တကယ်လို့သာ ဒီယတြာကို ယုံကြည်တဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်
အဆောင်ထားလိုက်သည်ဆိုဦးတော့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုအရ မဖြစ်ဘူး မမြောက်ဘူးဆိုရင်
ဒီယတြာလည်း နာမည်ပျက်ပါတရ်။ မူလ ရှာဖွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဗေဒဆရာတွေလည်း
တကယ်စွမ်းတဲ့ ယတြာလည်း အယုံအကြည်မဲ့သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဗေဒင်ပညာအပေါ် တကယ်လေးစားသူတွေရှိပါတယ်။ အထင်သေးသူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
မိမိရဲ့ ဘာမျှမဟုတ်တဲ့ လုပ်ရပ်လေးတစ်ခုကြောင့် ဗေဒင်ပညာကို ကျနော်ကတော့ ပိုပြီး အထင်မသေးစေချင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာကတော့ မခင်ခ အနေနဲ့လည်း ယတြာတွေ
အဆောင်တွေ ပေးချင်တဲ့ စေတနာရှိရင်လည်း စာတိုပေစဖတ်ပြီး ပြန်မျှဝေတာထက်
အသေအချာလေး လေ့လာပြီးတော့ ပြန်လည်မျှဝေစေချင်ပါတယ်…
မခင်ခလည်း ဗေဒင်ပညာကို ယုံကြည်သက်ဝင် ချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ…
ဆြာစည်သူစာနီဗိုရှင့်…သူများက ဆန်းဒေးဘွန်းန်ဆိုတော့..ဘယ်မင်အရောင်လေးကိုသုံးသင့်ပါ လဲရှင့်…
စံ-ဇာဏီဘို ရဲ့ ကြံစည်သမျှအောင်စေသောဝ် အမှတ်(၄) စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပါ။
ကိုရင် ဆွေးနွေး ပြင်ချင်ရင် စံ-ဇာဏီဘို နဲ့တာ ဆက်သွယ်ပါ။
“ခင်ခ” ဆိုတာ ဦးကျော်ဟိန်း ရဲ့ သမီး နာမည်ဆိုတော့ ကာ
ခင်ခ လို့ တွေ့ရင် “မခင်ခ” လို့ဘဲ ခေါ်မိမှာပါ။
မသိလို့များ ဒီနစ်နိမ်းပေးထား တာ လားလို့ ထင်မိပါတယ်။
သိသိကြီးနဲ့ သဘောကျလို့ ပေးထားတာဆိုရင်လဲ အိုကေပါဗျာ။
အမြဲတမ်းမှားပြီး မခင်ခလို့ ခေါ်ခံရတယ်နော်။
ကျနော်က သောကြာသားဆိုတော့ စမ်းကြည့်ပေါ့
ဒုတိယမြောက် လက်မလေး ထောင်သွားပါတယ်ဗျ။
ဦးကျော်ရဲ့ သမီးအမည်က မခင်ခင်ခ ဆိုတာ ဥိးကျော်နဲ့ဆုံဆည်းခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကထဲက သိပါတယ်။
မခင်ခလို့မှားခေါ်တာအတွက် စိတ်မဆိုးပါဘူး၊ကျွန်တော်ကအဲလိုဖြစ်အောင် နစ်နိမ်းကိုပေးထားတာကိုး၊
ဦးကျော်ရဲ့အမီးအမည်က မခင်ခင်ခ ဆိုတာဦးကျော်နဲ့ ဆုံဆည်းခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထဲကသိပါတယ်။